Sehatra fandraharahana tsy tokony atolotrao - Victor Mochere
Ny ankamaroan'ny tompona orinasa dia miatrika fanamby amin'ny fitantanany ny volany na noho ny tsy fahampian'ny fitantanana ara-bola na sahirana loatra ka tsy afaka manara-maso sy mifehy kaonty. Raha ny tokony ho izy, ny kaonty dia misy ny fanodinana, famintinana, famakafakana ary firaketana ny fifanakalozana ara-bola mifanaraka amin'ny fomba amam-panao sy ny fepetra takian'ny lalàna. Tsy asa tsotra ho an'ny olona iray izay mandray anjara amin'ny hetsika isan'andro toy ny varotra, fitantanana mpiasa, drafitra, fanangonam-bola, famahana olana, ankoatra ny hafa.
Vao mainka sarotra izany rehefa tsy manana kaonty momba ny kaonty, ary maro no tsy manana. Tsiambaratelo miharihary fa ny ankamaroan'ny tompona orinasa dia eo am-pamindram-pon'ny kaonty sy ny mpanamarin-kaonty amin'ny resaka ara-bola toy ny kajy ny tombom-barotra sy ny fatiantoka, ny fandoavana hetra, ny fitahirizam-bola ary ny famakafakana ny angona ara-bola mba handraisana fanapahan-kevitra lehibe.
Na izany aza, ny fampandehanana raharaham-barotra mahomby dia toy ny fitazonana ny vatana. Raha te ho salama ianao dia mila mihinana tsara sy manao fanatanjahan-tena tsy tapaka na inona na inona fandaharam-potoananao. Tsy azonao atao ny manakana ny fandehanana any amin'ny gym na mihinana sakafo ara-pahasalamana. Torak'izany koa, misy ny sehatry ny fandraharahana izay tsy maintsy idiranao tanteraka raha te-hihazona ny adin-tsaina sy ny tsy fahombiazana ianao.
1. Ny vola miditra
2. Ny fandaniana
Mitandrema amin'ny vola miditra aminao. Ny vola miditra dia ny vola miditra sy mivoaka amin'ny orinasanao. Zava-dehibe io vola io satria ampiasainao handoavana faktiora sy hamenoana tahiry. Raha tsy mifehy ny vola miditra sy mivoaka ny fanamby dia mety tsy hanaja ny adidy ara-bola ianao ary hiatrika olana amin'ny fandoavana ny faktiorao na ny fitazonana ny lisitrao na mahasoa na tsia ny orinasanao.
Araho sy araho ny fandanianao. Ireo fandaniana ireo dia mitaky fifehezana avo lenta amin'ny firaketana sy famakafakana ny fandaniana rehetra amin'ny orinasa na dia kely aza izany. Ny fandaniana amin'ny raharaham-barotra dia toy ny fivoahana ao anaty siny rano. Raha manana maromaro amin'izy ireo ianao dia azonao fantarina ihany ny halehiben'ny fahasimbana raha kajy ny fatiantoka amin'ny faran'ny volana.
Tsy maintsy mandinika ny volanao ianao. Zava-poana ny fitazonana firaketana raha tsy azonao ampiasaina ny angon-drakitra handraisana fanapahan-kevitra ara-bola. Tsy azo atao izany raha afaka mamakafaka sy mandika tsara ny firaketana ara-bola ianao.
Manaova fampihavanana tsy tapaka. Ity no dingana hanamarinana ny firaketana momba ny fifampiraharahana amin'ny antontan-taratasy isan-karazany toy ny rejisitrao, bokim-bola, kaontin'ny banky ary fanambarana fandaniana. Izany dia hanampy anao amin'ny fahadisoana na hosoka amin'ny fidiranao raha misy.
Aoka ianao ho tompon'andraikitra amin'ny varotrao. Amin'ny maha tompona orinasa anao, ianao no endrik'ilay orinasa sy lehiben'ny tsena. Ny marketing dia asa manan-danja loatra tsy maintsy atolotra. Tsy maintsy mitarika ny fampianarana marketing amin'ny laharana voalohany ianao.
Mitandrema amin'ny karamanao. Ny karama dia sanda lehibe amin'ny orinasa ary afaka mitahiry betsaka ianao amin'ny fananana olona mety hanao ny asa mety sy mandoa azy ireo tsara. Mifankazara amin'ny lalàna momba ny asa sy ny fepetra takiana ary araho hatrany am-boalohany. Ny lalàna momba ny asa dia tena manasazy ny mpampiasa raha voahitsakitsaka ary tsy fiarovana ny tsy fahalalana.